Abahlinzeki befarm & cosmetic abahlinzeki nefektri - China Pharm & Cosmetic Additives Manufacturers
IGlycine CAS 56-40-6 ye-Pharma Ibanga (USP / EP / BP)
Igama lomkhiqizo: Glycine
Ukubukeka: I-powder emhlophe ekhanyayo
Izici Zomkhiqizo: Ukunambitheka okumnandi, kuncibilika kalula emanzini, kuncibilike kancane ku-methanol ne-ethanol, kungancibiliki ku-acetone ne-ether, indawo encibilika: phakathi kuka-232-236 ℃ (ukubola).
Ukupakisha: 25kg / isikhwama, 25kg / isigubhu noma njengoba imfuneko yekhasimende
I-L-Lysine HCL CAS 657-27-2 ye-Pharma Ibanga (USP)
Igama lomkhiqizo: L-Lysine HCL
Ukubukeka: Amakristalu amhlophe noma i-crystalline powder
Izici Zomkhiqizo: Into enemibala ye-crystal, engenaphunga, enomuncu; encibilikayo emanzini, encibilikayo kancane ku-ethanol ne-diethyl ether
Ukupakisha: 25kg / isikhwama noma njengoba ngamunye imfuneko yekhasimende
I-L-Threonine CAS 72-19-5 ye-Pharma Ibanga (USP)
Igama lomkhiqizo: L-Threonine
Izici Zomkhiqizo: Iphunga, linoshukela kancane, liyancibilika futhi libole ngaphansi kwama-256 ℃, libola ngokushesha lapho lihlangabezana ne-alkali ehlanjululwa emazingeni aphezulu okushisa futhi lihamba kancane lapho lihlangana nama-asidi, ancibilika emanzini, angaxazululeki ku-ethanol, ether ne-chloroform.
I-L-Isoleucine CAS 73-32-5 yePharma Ibanga (USP / EP)
Igama lomkhiqizo: L-Isoleucine
Izici Zomkhiqizo: Iyababa ngokunambitheka, Iyancibilika emanzini futhi incibilike kancane ku-ethyl alcohol, Iphuzu lokuncibilika: 284 ℃.
I-L-Tryptophan CAS 73-22-3 yePharma Ibanga (USP)
Igama lomkhiqizo: L-Tryptophan
I-CAS NO.: 73-22-3
Ukubukeka: Amakristalu amhlophe aphuzi kancane noma i-crystalline powder
Izici Zomkhiqizo: Akunaphunga, kubaba kancane. Kuncibilikiswa kancane emanzini, kuncane kwi-ethanol futhi akunakunyibilika ku-chloroform, kepha kuncibilika kwisisombululo se-sodium hydroxide noma kunciphise i-hydrochloric acid, futhi kuncibilike kalula ku-formic acid. Thola umbala uma usuvele ekukhanyeni isikhathi eside.
I-valine CAS 72-18-4 ye-Pharm grade (USP)
Igama lomkhiqizo: L-Valine
Izici Zomkhiqizo: Akunaphunga, Ukunambitha okumnandi kepha okubabayo ngemuva kwalokho, Kuncibilikiswe emanzini futhi akuncibiliki neze e-ethyl alcohol
I-L-Phenylalanine CAS 63-91-2 ye-Pharma Ibanga (USP)
Igama lomkhiqizo: L-Phenylalanine
I-CAS NO.: 63-91-2
Ukubukeka: i-powder emhlophe kuya emhlophe emhlophe
Izici Zomkhiqizo: Iphunga elingejwayelekile nobumunyu. Isitebele ngaphansi kokushisa, ukukhanya nomoya
I-L-Methionine CAS 63-68-3 ye-Pharma Ibanga (USP)
Igama lomkhiqizo: L-Methionine
Izakhiwo zomkhiqizo: Iphunga elikhethekile kancane, ukunambitheka okuncane okubabayo. Iphuzu lokuncibilika: 280 ~ 281 ℃. Ayizinzile kuma-acids aqinile. I-Soluble emanzini, i-ethanol efudumele, isisombululo se-alkaline, noma i-dilute acid acid. I-insoluble ku-ethanol, icishe ingafinyeleli ku-ether.
I-L-Leucine CAS 61-90-5 ye-Pharma Ibanga (USP)
Igama lomkhiqizo: L-Leucine
Izici Zomkhiqizo: Nambitha okubabayo okuncane, kuncibilike emanzini, kuncibilike kancane otshwaleni, kungancibiliki ku-ether.
I-DL-Methionine CAS 59-51-8 ye-Pharma Ibanga (USP / EP)
Igama lomkhiqizo: DL-Methionine
Ukubukeka: i-white crystalline powder
Izici Zomkhiqizo: Indawo yokuncibilika ka-276-279 ℃, Encibilikayo emanzini, Kunzima kakhulu ukuncibilika ku-ethanol, Cishe ayincibiliki ku-acetone ethanol.
73-32-5 L-Isoleucine, L-Valine 72-18-4, Ukudla Kwezilwane, L-Threonine Pharm Ibanga, I-Pharm Grade L-Leucine, L-Threonine Ibanga Lokudla,